संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भूसालले दिए पार्टीकाे प्रशिक्षण! - हिमाल दैनिक
संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भूसालले दिए पार्टीकाे प्रशिक्षण!
११ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १४:०१
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं प्रखर वामपन्थी विश्लेषकका रुपमा परिचित घनश्याम भूसालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि शुक्रबारको संसद बैठकमा आफ्ना विचारहरु व्यक्त गरे।
यसरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आफ्ना विचार प्रकट गर्ने क्रममा त्यो कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न केहि वाक्याँश प्रकट गर्नेबाहेक आफूलाई उपलब्ध गराइएको ७ मिनेटको समय पूर्ण रुपले आफ्नो पार्टीको राजनीतिक दर्शन र भोलीको दिशा के कस्तो हुने भन्नेमै खर्चिए।
उनले व्यक्त गरेका विचारहरु सुन्दा लाग्दथ्यो, सांसद भूसाल संसदमा उपस्थित सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेता र सांसदभन्दा पनि आफ्ना कुनै जनवर्गिय संगठनका कार्यकर्ताहरुलाई भर्खरै बनेको नयाँ कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीतिक, सैद्धान्तिक र सांगठिनक विषयमा प्रशिक्षण दिइरहेका छन् कि भन्ने भान हुन्थ्यो।
प्रस्तुत छ सांसद भूसालले नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसका क्रममा व्यक्त गरेका विचारहरुः
सर्वप्रथमत म यहाँ यो नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्न उभिएको हुँ। यस सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने, हरेक पिँढीले इतिहासमा आफ्ना कर्म गर्दछन्। त्यी पिँढीहरुको जिम्मामा हिँजो गर्न बाँकी रहेका कामहरु पनि पर्दछन्।
मेरो दृष्टिमा राजा महेन्द्रको सबैभन्दा प्रतिक्रियावादी काम भूमीसुधार गर्न नसक्नु थियो र त्यो हाम्रो पिँढीमा सर्यो।
कांग्रेसले त्यो पूरा गर्न सकेन। उसका लागि त विदेशीहरुका लागि अझ राजनीतिक भाषामा भन्दा उदारीकरणका लागि कानुनहरु बनाउनु र त्यी कानुनहरु लागू गर्नु मात्रै नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त थियो। जसले गर्दा त्यो ऋण चुक्ता हुन सकेन र आज यो मुलुक ऋणी छ भन्ने मलाई लाग्दछ।
यसहिसाबले हेर्दा यो बेला हामी सबै नेपालीहरुको बेला हो। त्यसमध्ये जिम्मेवारीको हिसाबले यो वामपन्थीहरुको बेला, कम्युनिष्टहरुको बेला र माक्र्सवादीहरुको बेला हो। किन भने हामीले त्यो इतिहासको ऋण चुक्ता गर्नु पर्नेछ र आफ्नो पिँढीको भूमिका पूरा गर्नु पर्नेछ।
मैले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई किन समर्थन गर्छु भनेको हो भने यो दस्तावेजमा एउटा मुख्य कुरा छ। खासगरी मुख्य कुराको रुपमा समस्त इतिहासको जिम्मेवारी पूरा गर्ने एउटा वाक्य छ। बुँदा नम्बर ३० मा पाँच वर्षभित्र कृषिमा आश्रीत करिब दुई तिहाइ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गैरकृषि क्षेत्रमा परिचालित हुने अवसर श्रजना गरिनेछ। यो इतिहासको सबैभन्दा ठूलो कर्म हुनेछ जसका लागि हामी खडा छौँ।
कसरी गरिन्छ? के के कार्यक्रमहरु हुने छन् भन्नेबारे यसमा धेरै कुराहरु छन् र अरु बुँदाहरुले यसलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् र यसलाई व्याख्या गर्छन भन्ने लाग्दछ।
आजको भूमिको समस्या भूमि बाँढेर हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ। अहिले जमिनको हदबन्दी पाँचै बिगाह राख्यो भनेपनि त्यो पाँच बिगाह माथिको सम्पूर्ण जग्गा कब्जा गरेर राज्यले लिएर अरु एक हेक्टरभन्दा कम भएकाहरुलाई बाँड्यो भने पनि एक हेक्टरका दरले पुग्दैन भन्ने हामीलाई थाहा छ।
यसैले हिँजोको जस्तो भूमि बाँडेर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र यसमा हामी असाध्यै सचेत छौँ। त्यो कृषिको जनसंख्या, जो त्यसमा टाँसिएको छ, त्यसलाई उद्यममा ल्याउने नै हो र यसका सम्पूर्ण बुँदाहरु त्यसमा केन्द्रीत छन्। यो कुरा स्वत् प्रष्ट छ भन्ने लाग्दछ।
जहाँसम्म राजनीतिक प्रतिबद्धताको कुरा छ, हामी यो सम्पूर्ण राज्यलाई त्यतातिर लैजान्छौँ। पाँच सात लाख राज्यको तलब खाने यो सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रलाई त्यतातिर लैजान्छौँ। हामी ३७, ३८ हजार जो चुनिएर आएका छौँ, यो सम्पूर्ण हिसाबले उद्यमसँग जोडिने कुरा, हरेक पाना पाई उद्यमसँग जोडिन्छ भन्ने तर्फ लिएर जान्छौँ। त्यसको ज्ञारेन्टी गर्छौँ।
त्यस खालको कर प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन हरेक हिसाबले हाम्रो न्याय, व्यवस्था सबै हिसाबले लिड गरेर त्यस्तो राज्य बनाउँछौँ। त्यस्तो राज्य बनाउँछौ भन्ने कुराको ज्ञारेन्टी चर्चा नभएको कुरा हो कि आज यो कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत भएको छ र एउटा ऐतिहासिक अवसर मुलुकका लागि प्राप्त छ। त्यो अवसर के हो भने स्वयं हामीले हाम्रो पार्टीलाई यस्तो राज्य बोक्न सक्नेगरी राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्न सक्ने र समाजवाद सार्थक पार्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्छौँ भन्नेबारे हामीले कम चर्चा गरेका छौँ।
अब हामी जाने त्यतापट्टि हो। हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति र पंक्तिलाई हामीले त्यसरी निर्माण गर्छौँ। हामी हरेक व्यक्ति, हाम्रो पार्टीको सदस्य उत्पादनसँग जोडिएको हुनेछ। उसले नकमाएको सम्पत्ति खाने छैन भन्ने कुरा को ज्ञारेन्टी गर्छौँ अथवा हरेक पार्टी सदस्यले कमाएर खानेछ।
दोस्रो, कमाएको त्यो सम्पत्तिको हरेक आनाको ट्याक्स तिर्छ भन्ने कुराको ज्ञारेन्टी गर्छौँ। यसै हेर्दा यी पूँजीवादी जस्ता माग देखिन्छन्। हो, तपाइले सिद्धान्तको आँखामा हेर्नु भयो भने यो पूँजीवादी जस्तो हो तर, यसलाई समाजवादले नियमन गर्छ। त्यस हिसाबले भन्ने हो भने, तेस्रो, यो पार्टीको चरित्र हरेक पार्टी सदस्यले तिरेको करको उपयोग मुलुकका त्यी सिमान्तकृत, दलित र जनजातिको पक्षमा हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराको ज्ञारेन्टी गरिनेछ। यस्तो एउटा तलदेखि माथिसम्मको सुदृढ पार्टी बनाइने छ। यस्तो पार्टीले म त भन्छु आफैँमा हिजोका जडताहरुबाट मुक्त हुनेछ र अरु प्रतिपक्षीहरुलाई पनि यस्ता जडताबाट मुक्त गर्न प्रेरित गर्नेछ र अगाडि बढाएर लैजानेछ।
यसरी हामीले आउने पाँच वर्षभित्रमा त्यो दिशातर्फ जानेछौँ। यसरी जानका लागि स्वयं हाम्रो पार्टी त्यति पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाउँछौँ। हाम्रो पार्टीका हरेक कमिटीहरुमा यी विषयमा छलफल हुनेछन्, हाम्रो राष्ट्रका विषयमा छलफल हुनेछन्, वैदेशिक नितिहरुबारेमा छलफल हुनेछन्। त्यहाँको शिक्षा स्वास्थ्यकाबारेमा छलफल हुनेछन्। त्यहाँ सिमान्तकृत जनताको अधिकारकाबारेमा छलफल हुनेछन् र त्यी छलफलहरु सोझै जनतासँग गाँसिनेछन्।
यसरी भविश्यका हिसाबले भन्ने हो भने हामी अहिलेको प्रतिनिधिमूलक मात्र होइन यो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई अझ प्रत्यक्ष डेमोक्रेसीतर्फ लैजानका लागि निरन्तर लागिरहनेछौँ। यो पार्टी यस्तो सबल सुदृढ पार्टी नै आगामी समाजवादको राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको ज्ञारेन्टी हुनेछ भन्ने अवगत गराउन चाहन्छु।
Prevपछिल्लोपरिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने राजनीतिक कार्यक्रम खोई? गच्छदार
अघिल्लोकम्युनिष्टहरुको एकता र चुनावमा हारको चुनौतिलाई अवसरमा बदलौँः देउवाNext